श्रीमान श्रीमतीको झ’गडा छु’ट्याउन जादा आ’फ्नै ज्या’न गयो – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/श्रीमान श्रीमतीको झ’गडा छु’ट्याउन जादा आ’फ्नै ज्या’न गयो
श्रीमान श्रीमतीको झ’गडा छु’ट्याउन जादा आ’फ्नै ज्या’न गयो
3,151 Less thanaminute
ओखलढुंगा, श्रीमान श्रीमतीबीच भएको झ’गडा छु’ट्याउन जादा शिक्षिकाको ह’त्या भएको छ। झ’गडा छु’ट्याउन जा’दा मोलुङ्ग गाउँपालिका–५ प्राप्चाकी ३२ वर्षिय शिक्षिका हिरादेवी कटुवाल कार्कीको ह’त्या भएको हो। मंगलबार बिहान साढे ८ बजे विद्यालय हि’डेकी शिक्षिका कार्की मृ’त फेला परेकी थिइन्। कार्कीको ह’त्या गरेको अ’भियोगमा सिद्धिचरण नगरपालिका–९ का २५ वर्षिय रविराज रम्तेल र उनकी श्रीमतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। रम्तेलकी श्रीमती माइत मोलुङ्ग गाउँपालिका–५ प्राप्चामा बस्दै आएकी थिइन्।
श्रीमतीलाई लिन गएका रम्तेल र श्रीमतीबीच कु’टाकुट भइरहेको समयमा छु’ट्याउन जादा शिक्षिका कार्कीको ह’त्या भएको प्रहरीको प्रा’रम्भिक अनुसन्धानबाट खु’लेको छ। प्रहरीको प्रा’रम्भिक अनुसन्धानका क्रममा रविराजले कार्कीको ह’त्या गरेको स्वी’कारेका छन् ।ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा म्या’द थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी निरीक्षक मिलन बस्नेतले बताए। ‘अनुसन्धानका क्रममा रम्तेल दम्पतीबीच भएको झ’गडा छु’ट्याउन जादा कार्कीको ह’त्या भएको देखिन्छ, तर थप तथ्य आउन बाँकी छ।’ प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले भने।
मृ’तक कार्कीको टाउकोको पछाडी भाग र चिउडोमा ढुंगाले हा’नेको जस्तो चो’ट देखिएकाले स्थानीयले ह’त्याको आ’शंका गरेका थिए। प्रहरी श्रोतका अनुसार रविराज चोरी मु’द्दामा पक्राउ परी ५० हजार रुपैयाँ ध’रौटी र करिब दुई महिना का’रागारमा कै’द भु’क्तान गरी भर्खरै छु’टेका थिए । बे’मेलका कारण उनकी श्रीमती माइतमा बस्दै आएकी थिइन् । मृ’तक कार्की सोहि गाउँपालिकाको वडा नं.६ श्रीचउरमा रहेको स’हिद पेशल आधारभूत विद्यालयमा २०६६ सालदेखि बालशिक्षा सहयोगीका रुपमा का’र्यरत थिइन् ।उनको अढाई वर्षको छोरा छ। उनको श्रीमान एक महिना अघिमात्र वैदेशीक रोजगारीबाट घर फर्किएका थिए।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा भयो यस्तो चमत्कार, अब के हुन्छ ?
लकडाउनलाई कडा बनाउन भोलीदेखि प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने
फिल्म रिलिजअघि नै ‘सस्पेन्स’ खुलाएपछि हलमा दर्शक के हेर्न जाने?
राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्ना नातेदारले सम्बन्धको दुरूपयोग नगरेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलेको प्रष्टोक्ति
बाग्लुङमा चट्याङका कारण एकको मृत्यु, ६ घाइते